Wararka - Astaamaha iyo sida loo adeegsado duubista duubista duuban
Astaamaha iyo sida loo adeegsado duubista duubista duuban
Sida loo doorto dhalista saxda ah
Astaamaha astaamaha duubista duuban
Qaadista duubista duuban waa nooc gaar u dhalasho. Wareegyada gudaha iyo dibaddaba ee xargaha ayaa leh marinno dhaadheer oo laalaab ah, oo ruxmooyinkuna waa qaab shaashad ah. Rullaluistemadka iyo wadiiqada ayaa ku jira xiriir khadka, oo qaadi kara radial culus iyo culeys isku dhafan oo axial ah, sidoo kale wuxuu qaadi karaa culeys saafi ah. Markay sii weynaato xagasha xiriirka, ayaa sare usii qaadeysa awoodda qaadista foosha.
Naqshadeynta duubista cajaladdu waa inay ka dhigtaa xariijinta xiriirka u dhexeeya rullaluistemadka iyo waddooyinka tartanka gudaha iyo dibedda ballaadhinta oo ka tallaaba isla barta barta dhidibbada u sita si loo ogaado rogrogista saafiga ah.
Qaab dhismeedka cusub ee duuban ee la duubay ayaa qaatay qaab dhismeed la xoojiyay. Dhexroor rullaluistemadka ayaa la kordhiyay, dhererka rullaluistemadka waa la dheereeyey, iyo tirada rollers la kordhiyay. Awoodda dhalista iyo nolosha daalka ee sidashada si weyn ayaa loo hagaajiyay iyadoo la adeegsanayo rullaluistemadka convex. Xidhiidh goobeed iyo midabbo leh ayaa loo adeegsadaa inta u dhexeysa wejiga dhammaadka weyn iyo feeraha weyn ee rullaluistemadka, taas oo hagaajinaysa saliidda.
Dhalista noocan ah waxaa loo qaybin karaa hal saf oo isku xigta, isku xigta laba jibbaaran iyo afar xariijimo oo duuban oo isku xigta. Nooca noocan ah wuxuu kaloo adeegsadaa alaabooyin taxane ah oo Ingiriis ah.
Nooca qafis ee duubista oo duuban
Inta badan meerisyada duuban ee duubku waxay ka samaysan yihiin baqashada birta la riixay. Si kastaba ha noqotee, marka dhexroorka banaanka ee culeysku ka weyn yahay 650mm, baqashada leh godadka tiirarka ayaa la isticmaalaa.
Safka kaliya: gawaarida hore, gawaarida gadaal, mashiinka mashiinka mashiinka, gawaarida gawaarida, gawaarida gawaarida, mashiinada dhismaha, mashiinada wax qaada, mashiinada daabacaadda iyo aaladaha kaladuwan ee kaladuwan.
Safka laba-geeslaha ah: mashiinka mashiinka mashiinka, tareenka iyo kaydinta wareega
Afar saf: taageero duub